Ịmepụta ngwa ọdịda maka Windows
Weebụ & Chọọ Best nke Weebụ
Ịmepụta Ngwa Mbụ Ngwaọrụ Gị
Ịmepụta Ngwa maka Ngwaọrụ Mobile
Foto site n'aka Google.
Ndị na-emepụta ndị na-amateur amateur na coders na-atụkarị ụjọ na nsogbu dị iche iche gbasara usoro mmemme nke ngwa ngwa. Obi dị m ụtọ na nkà na ụzụ dị elu anyị nwere taa, na-eme ka ọ dị mfe n'ịmepụta ngwa ngwa . Isiokwu a na-elekwasị anya n'otú e si emepụta ngwa ngwa ọkpụkpọ na-agafe ọtụtụ nhazi ihuenyo .
Ịmepụta ngwa ngwa
Kedu ka ị na-esi aga ịmepụta ngwa ngwa mbụ gị? Akụkụ mbụ ị ga-ele anya ebe a bụ nha nhazi nke ị na-achọ ịmepụta na ikpo okwu ị bu n'obi iji. N'isiokwu a, anyị na-arụ ọrụ na ịmepụta ngwa ngwa maka Windows, Pocket PC and Smartphones.
Tupu Ị Bụrụ Onye Nwepụta Onwe Gị na Mobile App Onye Mmepụta
Gụkwuo maka ndị ọzọ ....
Ịmepụta ngwa Windows Mobile mbụ
Foto site n'ikike Notebooks.com.
Windows Mobile bụ ngosipụta siri ike nyeere ndị mmepe aka ịmepụta ngwa dịgasị iche iji welie ahụmịhe ọrụ. N'elu Windows CE 5.0 dịka ndabere ya, Windows Mobile jupụtara n'ọtụtụ njirimara ndị gụnyere shei na ọrụ nkwukọrịta. Ịmepụta ngwa Windows Mobile mere ka ọ dị mfe maka onye nrụpụta ngwa - ọ fọrọ nke nta ka ọ dị mfe dịka ịmepụta ngwa ọdịyo.
Windows Mobile ugbu a gbahapụrụ, na-enyefe Windows Phone 7 na usoro ihe ntanetị Windows Phone 8 kachasị ọhụrụ, bụ ndị jidere mmasị nke ndị mmepe ngwa ngwa na ndị na-eji ekwentị.
Ihe ị ga-achọ
Ị ga - achọ ihe ndị a iji malite ịmepụta ngwa mkpanaka gị:
Visual Studio 2005 ma ọ bụ 2008: Usoro a dị oke mkpa na-enye gị ohere ịmepụta, onye edemede, debug ma gosipụta ngwa gị, niile site na otu nchịkọta. Ọ dị mfe nghọta ma jiri ya rụọ ọrụ.
Windows Mobile SDK: Akụrụngwa bara uru a nwere ihe editọ na API na isi ihe dị mkpa iji nweta ọrụ Windows Mobile. Ọ na-enyekwa gị ngwa ngwa, ịkwanye emulators na akwụkwọ.
ActiveSync ma ọ bụ Windows Mobile Center Center: Ọrụ ọrụ na Windows Mobile Ngwaọrụ Center nyere aka n'iji ngwa na emulator ma ọ bụ ngwaọrụ. Mgbe Windows XP na-arụ ọrụ na Njikọ Ọrụ, Windows Vista na-abịa na Windows Mobile Device Center.
Ngwaọrụ ị nwere ike iji dee data na Windows Mobile
Visual Studio na-enye gị ihe niile dị mkpa iji wuo ngwa na koodu akara, koodu ejiri ma ọ bụ nchikota nke asụsụ abụọ a. Ka anyị lee ugbu a ngwaọrụ ndị ị nwere ike iji dee data maka ịmepụta ngwa Windows Mobile.
Codex Native , nke ahụ bụ, Anya C ++ - na-enye gị kpọmkwem ngwaike ịnweta na arụmọrụ dị elu, na obere obere akara ụkwụ. Edere ya na asụsụ "ala" nke kọmputa jiri na ọ na-agba ọsọ ma na-egbu ya ozugbo.
Enwere ike iji koodu obodo naanị iji mee ngwa ngwa - a ghaghị ịghachite data niile ma ọ bụrụ na ị na-agagharị na Os ọzọ.
Nchịkwa a ma ama , ya bụ, Anya C # ma ọ bụ Visual Basic .NET - nwere ike iji mepụta iche iche ụdị nyocha nke onye ọrụ na-enye onye mmepụta ohere ịnweta data weebụ yana ọrụ site na iji Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition.
Ụzọ a na-edozi ọtụtụ nsogbu nzuzo na C +, ma na-ejikwa ebe nchekwa, emulation na debugging, nke kachasị mkpa iji dee ngwa ngwa dị mgbagwoju anya, ngwanrọ mgbagwoju anya nke na-eme ka software na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa nwee nsogbu.
ASP.NET nwere ike ide ya site na Visual Studio .NET, C # na J #. ASP.NET Njikwa Mobile dị irè maka ojiji na ngwaọrụ dị iche iche site na iji otu koodu setịpụrụ, yana ọ bụrụ na ịchọrọ otu bandwit data ga-ejide n'aka maka ngwaọrụ gị.
Ọ bụ ezie na ASP.NET enyere gị aka ịchekwa ọtụtụ ngwaọrụ, njedebe bụ na ọ ga-arụ ọrụ naanị mgbe ngwaọrụ onye ahịa jikọọ na ihe nkesa ahụ. N'ihi ya, nke a anaghị adabara n'ịchịkọta data ndị ahịa ka ha mekọrịta ya na ihe nkesa ma ọ bụ maka ngwa ndị na-eji ngwaọrụ maka iji data eme ihe.
Ngwa Google API enyere ndị mmepe aka ịnweta data niile metụtara ọrụ Google. Ebe ọ bụ na ndị a na-adabere n'ụkpụrụ iwu dịka HTTP na XML, ndị coders nwere ike ịmepụta ngwa ngwa ma wuo ngwa maka Windows Mobile.
Esi tinye Ntanetị na Windows 8 Ihuenyo Mmalite Iji IE10
Mee ma mee ngwa ngwa Windows Mobile
Foto site n'ikike nkeji.
Ihe ndị a na - enyere gị aka ịmepụta ngwa Windows Mobile efu:
Mepụta oru ohuru
Mepee Visual Studio wee gaa File> Ọhụrụ> Ọrụ. Gbasawanye Ụdị Ụdị Ụdị ụdị ma họrọ Smart Ngwaọrụ. Gaa na ihe nkwụnye Ụdị, họrọ Smart Ngwaọrụ Project ma kụrụ OK. Họrọ Ngwaọrụ Ngwa wee pịa OK. Ekele! Nanị ịmepụtara ọrụ mbụ gị.
Gwuo gburugburu na nzuzo
Ntugharị Toolbox na-enye gị ohere igwu egwu na ọtụtụ atụmatụ. Lelee nke ọ bụla n'ime bọtịnụ drag-na-dobe a maka ịmatakwu ụzọ nke usoro ahụ si arụ ọrụ.
Gbaa ngwa gị
Nzọụkwụ ọzọ ga-agụnye ijikwa ngwa gị na ngwaọrụ Windows Mobile. Jikọọ ngwaọrụ na desktọọpụ, pịa igodo F5, họrọ emulator ma ọ bụ ngwaọrụ iji depụta ya wee họrọ OK. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ị ga - ahụ ngwa gị na - agba ọsọ.
Ịmepụta Ngwa maka Smartphones
Foto Site n'ikike BlackBerryCool.
Ịmepụta ngwa maka Smartphones yiri Windows Mobile ngwaọrụ. Mana ị ga-ebu ụzọ ghọta ngwaọrụ gị. Smartphones nwere atụmatụ yiri PDAs, n'ihi ya, ha ezigawo ma kwụsị njirimara bọtịnụ. A na-eji igodo azụ mee ihe maka arụ ọrụ azụ na ihe nchọgharị azụ.
Ihe kacha mma banyere ngwaọrụ a bụ igodo dị nro, nke nwere ike ịmepụta. Ịnwere ike iji ọrụ a mepụta otutu ọrụ. Igodo bọtịnụ na-arụkwa ọrụ dị ka bọtịnụ "Tinye".
Rịba ama: Ịkwesịrị ịwụnye SmartPhone 2003 SDK iji dee Visual Studio .NET 2003.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na smartphone nwere touchscreen?
Nke a na-abịa akụkụ siri ike. Na enweghị njikwa bọtịnụ na mkpịsị aka touchscreen, ị ga-ahọrọ njikwa ọzọ, dịka menu. Igwe ihe ngosi na-enye gị akara ngosi MainMenu, nke bụ omenala. Ma ọtụtụ nhọrọ nhọrọ nhọrọ n'elu ga-eme ka usoro ahụ daa. Ihe ị nwere ike ime bụ ịmepụta ndị ikom dị oke elu na ọkwa ma nye ọtụtụ nhọrọ n'okpuru onye ọ bụla n'ime ha.
Ide ederede maka smartphones smartphones
Ịzụlite ngwa ngwa maka blackberry os bụ nnukwu azụmahịa taa. Maka ide ederede blackberry, ị ga-enwerịrị:
The blackberry JDE nkwụnye-maka maka Eclipse
Blackberry ama na data cable
Ihe omuma nke JAVA.
Eclipse na- arụ ọrụ dị ukwuu na mmemme JAVA. Akwukwo ohuru ohuru, nke a na - etinye ya na .COD mgbakwunye, nwere ike ibughari ya n'elu ngwa. Ị nwere ike ịnwale ngwa ahụ site na ịchọta ya site na Njikwa Ngwaọrụ ma ọ bụ site na iji nhọrọ "Javaloader" akara.
Rịba ama: Ọ bụghị niile BlackBerry API ga-arụ ọrụ niile Blackberry smartphones. Ya mere rịba ama ngwaọrụ ndị nabatara koodu ahụ.
Profaili profaịlụ ekwentị na More
Ịmepụta Ngwa maka PC akpa
Foto Site n'ikike Tigerdirect.
Ịmepụta ngwa maka Pocket PC yiri nke ngwaọrụ ndị dị n'elu. Ihe dị iche ebe a bụ na ngwaọrụ ahụ na-eji NET Compact Framework, nke bụ ihe karịrị ugboro iri "ọkụ ọkụ" karịa ụdị Windows zuru ezu ma na-enye ndị mmepe ihe ndị ọzọ, njikwa na nkwado weebụ.
Enwere ike ịnyefe ngwugwu a na obere faịlụ CAB ma tinye ya na ngwaọrụ gị - nke a na-arụ ọrụ ngwa ngwa ma nwekwuo nsogbu.
Foto site n'ikike nke SolidWorks.
Ozugbo ị mụtara ịmepụta ngwa ngwa ngwa ngwa mobile, ị ga-aga n'ihu ma gbalịa ime ka ihe ọmụma gị dịkwuo mma. Nke a bụ otú:
Na-etinye aka na onye mmepụta forums na mkparịta ụka.
Debanye aha na ụlọ akwụkwọ mmụta, ma na ntanetị ma n'ụzọ ọzọ. Nke a ga - enye gị ndụmọdụ ndị ọzọ na usoro ịmepụta ngwa dịgasị iche iche.
Lelee nkuzi vidio n'ịntanetị maka ịmepụta ngwa ọdịnala dị iche iche.
Debanye na Weebụ maka mmelite niile na isiokwu.
Ịmepụta Ngwa maka Usoro Mgbochi Dị Iche
Ngwa ngwanrọ kachasị mma maka iPad
Na-adịgide Ndụ! Achọrọ Ịmata Ihe Nile gbasara Gị
Atụmatụ maka Ime Home Movies nke Na-ahụ Akwa
Kedu ihe na-agba ụda?
Esi na-ege ntị na redio Intanet
NASCAR na ọkpụkpọ Redio na Satellite Mmemme
Otu esi eji Winamp iji tọghata usoro ọdịyo
Esi edozi ngwa ngwa Mac nke na-amaliteghị?
Weghachite ma ọ bụ Bugharịa ICal gị ma ọ bụ data Kalinda gaa na Mac ọhụrụ
Kedu ihe Njikwa ICNS?
Kedu otu DPP AMP si arụ ọrụ na-eme ka egwu egwu site na ekwe ntị gị
The Best Retro-Style iPad Games
Gbanwee ederede ederede ederede na Mac os X Mail
6 nke Ngwaọrụ Best Mobile
Kedu esi eji Mark mee ihe iji kpakpando na Gmail
Olee otú Wụnye Android Debug Bridge (ADB)
Otu esi eziga Email na IncrediMail
Kedu oke ngwa ngwa 802.11g netwọk Wi-Fi?
Otu esi eji Ngwaọrụ Nchọpụta Web
Nrụgide Nrụgide Na-ahụ Maka Nchọpụta Sensọ Na-abịa
Kedu ihe Njikwa ACO?
Ibi na Ntu: Samson Go Mic Connect Review
Amazon Echo vs Apple HomePod: Kedu onye ị chọrọ?
Gịnị Bụ Mkpebi?
Ahụmahụ DVR na-enweghị ụgwọ ọnwa
Kedu Facebook.com na Gịnị mere O ji baa uru?
Otu esi aguta akwukwo Google obula na ekwentị gi ma obu mbadamba
The 9 Best Multiplayer PS4 Egwuregwu ịzụta na 2018
Gbanyụọ Nchekwa Ama Nchekwa onwe